Sarudzo yenyaya dzakanakisa dzinoitika
3 akanakisa mabhuku aJohn Fante
Kufuridzirwa kwaBukowski uye akanunura nekutenda kune uyu chipangamazano. John Fante atove nacho icho chinhu chemunyori anozivikanwa muAmerica akaiswa mukupesana kwayo kwakadzama kwezana ramakore rechimakumi maviri. Dichotomy pakati penzira inobudirira yeAmerica yehupenyu hwehupfumi uye yemagariro uye ezvematongerwo enyika mimvuri; pamusoro…
3 akanakisa mabhuku naPatricio Pron
Nezita rinorangarirwa zviri nyore nekuda kwemimhanzi yake, weArgentina Patricio Pron anovavarira kuve munyori anonongedzera muzana rino ramakumi maviri nerimwe. Tenzi wenyaya muchizvarwa chinobatsira uye chakaorera kune ino rondedzero synthesis, sezvakaratidzwa neArgentina Samanta Schweblin kana Oscar Sipán nekuti ...
Rufu rwaMurat Idrissi, naTommy Wieringa
Munyori wechiDutch Tommy Wieringa anotitora isu kuenda kunyaya yechokwadi nezve avo vanodzinga vana vezana ramakumi maviri nemasere. Vanhu vezera ripi neripi mukutsvaga ramangwana rakarambwa. Pfungwa dzekare yemiganhu seisina musoro upenzi, kana munhu achikwanisa kuramba kodzero ye ...
Mabhuku matatu akanakisa e Charles Bukowski
Tikugashirei kunyika yeBukowski, munyori asingaremekedzi par kugona, munyori wemabhuku evisceral anoparadzira bile munzvimbo dzese dzenzanga (ndine hurombo dai ndanga ndanyanya "kuona"). Kupfuura kuswedera iyi nyanzvi nekutsvaga paInternet senge «Charles Bukowski mitsara »yaunoshandisa kudzoreredza zviono zvako ...
Kupera kwemwaka, naIgnacio Martínez de Pisón
Pakati paMartínez de Pisón naManuel Vilas pane kuomarara kwekunyora kunopfuura kwehukama hwenzvimbo. Icho chinhu chinoratidzika kunge chinopinda mukati meicho chaiicho chemabhuku kuenda kumatunhu akakosha asingawanzoonekwa mune rondedzero yazvino. Chii chandinoziva, pamwe chaive chinhu chekutapa muma80s, ...
Munun'una wangu, naAlfonso Reis Cabral
Zvisungo zveropa izvo pakureba kumwechete mumuti wemhuri zvinogona kupedzisira zvadzikira kusvika pakunyura. Kainiism ndiwo marongero ezuva renhaka, nekuda kwekuda kana kuita shanje dzakapararira chero bedzi munhu achirangarira. Hama hazvigare zvichireva kunzwisisa uye kwakanaka vibes. ...
Claus naLucas, naAgota Kristof
Dzimwe nguva mamiriro ezvinhu anorangana kuumba chimwe chinhu chakasarudzika kubva mukusagadzikana kana nenjodzi. Panyaya yaAgota Kristof zvese zvakaungana kuitira kuti asanyora vhoriyamu iyi yenhau nhatu mumutauro wekunze uyo akamugamuchira pakutiza kwake kubva kuHungary nyowani yaiitwa muchivande ...
Candela, naJuan del Val
Nenhoroondo yake yapfuura "Zvinoratidzika kunge nhema" neakazvidonongodza (asi akaganhurirwa kuhupenyu hwake), Juan del Val akamutsa mhirizhonga uye zvakare mablister mumatunhu akasiyana kwazvo, kupfuura zvakanyanyisa zvinyorwa. Asi iyo imwe nyaya yechokwadi nezvekuti ndiyani akanyanya kuburitswa zvakaringana mu ...
Bitna pasi peSeoul Sky, naLe Clézio
Hupenyu chakavanzika chakaumbwa nezvimedu zvekurangarira uye mweya mweya fungidziro yeramangwana iro yega kumashure ndiko kuguma kwezvose. Jean-Marie Le Clézio mufananidziro wehupenyu ihwohwo hwakaiswa mukati mehunhu hwake akatsunga kuburitsa zvese kubva mungano mune chero nzira iri ...
Mumusasa musasa, naIvan Jablonka
Dzimwe nguva mune yakanyanyisa fomu yechinyorwa chakapfupikiswa mune zvadzinotsanangurwa uye nekukurumidza mukukura kwayo, tinozviwana tiine huremu hwekufungisisa kwakadzika. Icho chiri muchidimbu chimiro cheJablonka, kunyange chiri chakapfuura chitaera chinoita kunge chinongova chimiro ...